Nhau dzeZimbabwe, 04 Kurume 2019
Muvhuro 4 Kurume 2019
Kurume 04, 2019
VeChidiki muHarare Vanoti Vanotsigira VaChamisa
Vechidiki mubato reMovement for Democratic Change mudunhu reHarare vanoti vawirirana kutsigira VaNelson Chamisa semutungamiriri webato iri musarudzo dzirikutarisirwa muna Chivabvu.
Vatsigiri vemaWarriors Voshushikana neMatambiro eVatambi Vavo Pamberi peMakwikwi eAfcon
Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kushushikana nemamiriro akaita zvinhu kwasara masvondo matatu chete kuti chikwata chavo chemaWarriors chipinde munhandare mumutambo mukuru we 2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville.
Paramende Inoti RBZ Iri Kukwereta Mari Zhinji Zvisiri paMutemo
Komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, yePublic Accounts, nhasi yaratidza kusafara nenyaya yekuti bhanga guru rerenyika, reReserve Bank, riri kutyora bumbiro remutemo wenyika nekukwereta mari kubva kune mabhanga nemasangano ekunze risina mvumo yeparamende.
VaMthuli Ncube Votarisirwa Kuita Musangano neChitatu muWashington DC
Musangano uyu ndewekupa mukana zvizvazvarwa zveZimbabwe kuti zvisangane negurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vachipangana navo mazano anoita kuti Zimbabwe ibudirire.
Nyanzvi Dzoshora Zviri Kuitwa neHurumende yaVaMnangagwa
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti dziri kushushikana zvikuru nehuwandu hwevanhu vari kusungwa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
VaMangudya Votarisirwa Kubvunzurudzwa neKomiti yeParamende
Sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa zvakanaka kwemari dzehurumende, VaTendai Biti, vanoti vari kutarisira kuita musangano wakakosha zvikuru negavhuna webhanga guru renyika.
Kurume 03, 2019
Dambudziko Rekushomeka kweMafuta Rodzoka Zvekare muNyika
Vanhu vave kuchema chema nedambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari mumaguta akawanda munyika zvikuru muHarare.
Kurume 02, 2019
Musangano weARTUZ muBulawayo Unobuda neZvisungo Zvishanu
VaMasaraure vati paitwa zvisungo zvishanu zvinosanganisira kuudza hurumunde kuti isaine gwaro rechirongwa che ‘safe schools’ chakatenderanwa kuOslo kuNorway muna 2015.
Muzvare Mamombe Voramba Vari Muchitokisi Kusvika Muvhuro
Mumiriri weHarare West muparamende, Muzvare Joana Mamombe, vasungwa Mugovera mangwanani kuNyanga vari pamusangano wedare reparamende. Muzvare Mamombe vanonzi vatorwa nemapurisa mutauriri weparamende, VaJacob Mudenda, vakatarisa, ndokuendwa navo kuHarare Central Police Station.
Kurume 01, 2019
VaChamisa Vokurudzirwa Kuratidza Hutungamiri Hwavo Vachijekesera Vatsigiri Zvichaitwa kuKongiresi
Apo kongiresi ye MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa yava pedyo kuitwa, mubato iri hamuna kumira zvakanaka.
Varairidzi Voita Musangano muBulawayo neMugovera
Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa, reamalgamated rural teachers of Zimbabwe, ARTUZ, rinoti riri kuita musangano nenhengo dzaro muBulawayo mangwana.
Kanzuru yeHarare Yokurudzira Vagari Kushandisa Mvura Zvine Hungwaru
Mutauriri weguta reHarare, VaMichael Chideme, kuruboshwe, vanoti rimwe dambudziko nderekushaikwa kwemari yekunze yekuti vakwanise kuchenesa mvura.